Naing BSell | Item - အားဖြည့်ဆန်
minnie mouse3pc lunch set
Frozen saldal shoes
1. ဗီတာမင် အေ
2. ဗီတာမင် ဘီ 1
3. ဗီတာမင် ဘီ 6
4. ဗီတာမင် ဘီ 12
7. ဖောလစ် အက်စစ်
8. နိုင်ယာစင် တို့ပါပါတယ်။
1. ဗီတာမင် အေ - ကလေးငယ်တွေ အတွက် မျက်စိအားကောင်းစေတဲ့ အပြင် ကိုယ်ခံအားကောင်းစေတဲ့ အတွက် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှောရောဂါတွေ ကျု ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
2. ဗီတာမင် ဘီ 1 - ဦးနှောက် နှင့် အာရုံကြောကျန်းမာရေး အတွက်အရေးပါသလို နှလုံးကျန်းမာရေး အတွက်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။
3. ဗီတာမင် ဘီ6- ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝကမ္မ ဖြစ်စဉ်တွေ မှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ကပါဝင်ပါတယ်။ အရေးပြား ကျန်းမာရေး၊ အာရုံကြော၊ အသည်း နှင့် မျက်စိကျန်းမာရေး အတွက် ဗီတာမင် ဘီ6ကို ပြည့်ဝအောင်စားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
4. ဗီတာမင် ဘီ 12 - ထို့အတူ ဘီ 12 ကလည်း ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Neurotransmitter Signaling မှာ ပါဝင်တဲ့ အတွက် အာရုံကြောအားနည်းနေသူများ၊ ဘီ12 ချို့တဲ့ရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ ခြေလက် ထုံကျင် နေသူများ အနေနဲ့ မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် တစ်မျိုးပါ။
5. ဇင့်ဓါတ် - ဇင့်ဓါတ် ခေါ် သွပ်ဓါတ် ကတော့ ကလေးငယ်တွေ မှာ ဆိုရင် ဝမ်းလျှောရင် ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ သူက ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးပြီး နောကထပ်ဝမ်းလျှောမှာ ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ တခြားထူးထူးခြားခြားကောင်းစေတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါတွေ ကတော့ ဆံပင်ကျွတ်တာဂကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက် ပါးစပ်ပျက်နေသူများ အတွက် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေခြင်း၊ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ကိုကောင်းမွန်စေခြင်း(မျိုးအောင်ခြင်း) စတဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေ ရှိပါတယ်။
6. သံဓါတ် - လူတိုင်းသိတဲ့ အတိုင်း သံဓါတ်ချို့တဲ့ရင် သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဆိုးဆုံး ကလေးငယ်တွေ မှာ ကိုယ်ခန္ဓာ ကြီးထွား ဖွံ့ဖြိုးမှု့ကို ပါ ထိခိုက်လာစေပြီး ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော ဖွံဖြိုးမှု့ ကိုပါ နှောင့်နှေးလာစေပါတယ်။ လူကြီးတွေမှာဆိုရင်လည်း နုံးတာမျိုး၊ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်မရှိတာမျိုး၊ အလွယ်တကူမောပန်း နွမ်းနယ်တာမျိုး တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့မြန်မာ လူမျိုးတွေ မှာ သံဓါတ်ချို့တဲ့နေတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စားနေတဲ့ ပုံစံ အရ ကျွန်တော် တို့ က အသားစားတာနည်းတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။ သံဓါတ်ကလည်း အဓိက အနေနဲ့ နယအနီရောင်ရှိတဲ့ အသားများ (ဝက်သား၊အမဲသား၊ ဆိတ်သား) နှင့် သံဓါတ်တွေ အများကြီးစုထားတဲ့ ကလီစာ ဖြစ်တဲ့ ဝက်အသည်း၊ ကြက်အသည်း၊ အမဲအသည်းတွေမှာ အဓိက ပါပါတယ်၊ အရွက်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ပာင်းနုနွယ်၊ ကန်ဇွန်းရွက်တွေမှာ သံဓါတ်ပါဝင်ပေမယ့်လည်း တကယ့် တကယ်တမ်း ခန္ဓာကိုယ်က ထိုအရွက်တွေ က သံဓါတ်ကို အများကြီးမစုပ်ယူနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် သံဓါတ်ကို အနီရောင် အသား နှင့် အသည်းကနေပဲ အဓိကရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနီရောင် အသား တွေ ဆိုတာကလည်း တစ်ပါတ်ကို ၂ ရက်ထက် ပို စားလို့မသင့်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကင်ဆာဖြစ်တတ်လို့ပါ။ အသည်း ကလည်းကိုလက်စထရော များတဲ့ အတွက် နေ့စဉ်စားလို့ မသင့်တော်ပါ။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့တာ သံဓါတ် ပြည့်မီဖို့အတွက် သံဓါတ်အားဆေး ဒါမှမပာုတ် အားဖြည့်ဆန်တွေကို ဖြည့်စွက်စားပေးဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။
7. ဖောလစ် အက်ဆစ် - သွေးနီဥ အတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ ဓါတ်တစ်မျိုးပါ။ ဖောလစ်အက်ဆစ် ချို့တဲ့ရင် သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ဆဲလ် အသစ်တွေဖြစ်စေပြီး ဆဲလ်တွေကိုလည်း ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အပြင် ပုံမှန် ဆဲလ်တွေမှ ကင်ဆာဆဲလ် ပြောင်းလာသွားမှာ ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဖောလစ်အက်စစ်ဓါတ်ကို ပဲအမျိုးမျိုး၊ ပာင်းနုနွယ်၊ ပန်းပွင့်စိမ်း၊ ကညွှတ်၊ ဂျုံနှင့်ပြုလုပ်ထားသော အစားအစာများ၊ လိမ္မော်သီး၊ အသည်း စတာတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ အပြက် အခုနောက်ပိုင်း အားဖြည့်ဆန်တွေ မှာ ပါထည့်လာကြပါတယ်။
8. နိုင်ယာစင် - နိုင်ယာစင် ဆိုတာ ဗီတာမင် ဘီ3 ပါ။ သူက သွေးတွင်း ကိုလက်စထရော ကိုကျစေပြီး နှလုံးကျန်းမာရေး ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်တက်စေသည့် အပြင် အခုနောက်ပိုင်း အဆစ်အမြစ်ရောင်တာကိုလည်း သက်သာစေတာကိုတွေ့လာရပါတယ်။